Warbixinta MSF oo ka jawaabeysa been abuurka ka dhanka ah shaqadeeda oo lagu soo daabacay bogga AmirNur - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
August 13, 2012 – MSF waxay beenineysaa eedeymaha lagu daabacay booga intarnetka ee AmirNur kuwaas oo ka dhanka ah shaqada ay ka qabato Somaliland. Isbitaalda ay ka howlgasha MSF ee ku yaala Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay leehyihiin taariikh dheer marka ay timaado yareynta dhimashada dhalaanka waxeyna bulshooyinkaas ka haysataa taageera weyn maadaama hay’adda ay u shaqeeyaan shaqaala caafimaad oo leh tawabar fiican islamarkaana ay adeegyada ku bixiso nidaamka ugu haboon.
Lixdii bilood ee ugu horeysay sanadka 2012 oo ay MSF kala shaqeyneysay wasaaradda caafimaadka isbitaalka guud ee magaalada Burco, kooxaha caafimaadka ee MSF waxey fududeeyeen in ka badan 2,000 oo dhalma, oo 900 oo ka mid ah ay ahaayeen kuwa xaaladdooda ay khatar tahay iyadoo 177 ka mid ah hooyooyinkaas ay u baahdeen qaliin. http://bit.ly/PdrYTG
Tan iyo markii MSF ay bilowday in ay ka howl gasho Burao bishii Janaayo 2011, tirade bukaanka la qaabila sadex jeer ayey kor u kacday, waxaana yaraaday dhimashada caruurta. Tirada bukaanka oo badan awadeed, MSF haatan waxay balaarineysaa qeybta daryeelka hooyooyinka uurka leh ee isbitaalka.
Somaliland gudaheeda tirade dhimashada caruurta waxay gaareeysaa ilaa 1,044 min boqolki kun ee dhalmo. Sidaa darted, waxay ka mid tahay meelaha ugu xun ee lagu dhalo. Shantii qof ee dumar ah mid ka mid ah oo kali ayaa leh khibrad umulisanimo.
In la baahiya warar an sugneyn oo ku saabsan daryeelka caafimaadka waxay horsedi kartaa xaalad khatar ah maadaama ay wax u dhimi karta qaabka ay dadka u raadsadaan adeeg caafimaad. Hooyooyinka u baahan adeeg caafimaad oo deg deg ah, waxay ka welweli karaan in ay adeeg caafimaad raadsadaan taas oo khatar ku ah hooyooyinka uurka leh iyo caruurtaba.
MSF waxay wasaaradda caafimaadka ku wareejisay mashruucyadeedi Hargeisa (2011) iyo Ceerigabo (2012).
Tags: Hargeisa, MSF, Somalia, Somalis
Qoraalada kale ee ku saabsan Maroodi Jeex Region, Somaliland